Ukunyuka Kwelanga Izithombe Zohambo Kwesinye Ukulinganisa nge “Spider-Man: Kude Ekhaya” | Izindaba zeNAB | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi we-NAB Show LIVE. Izindaba Zobunjiniyela Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » Ukuhamba Kwezithombe Zama-Sun Ukuya Kwenye Inhlanganisela "Nesicabucabu: Ekhaya"
Ekubambeni kwayo kokuqala kwi-franchise ye-Spider-Man, i-studio ikhiqiza i-hologram eveza umsuka wama-Elementals.
Adelaide, eNingizimu ne-Australia-Rising Sun Pictures ithunyelwe ngaphezulu kwe-100 imiphumela yokubukwa kwe-Columbia Pictures 'ne-Marvel Studios' ephambili I-spider-man: kude nekhaya, esinye sezibhamu ezilindeleke kakhulu kulonyaka. Umsebenzi we-studio wawuhlanganisa nokulandelana kwe-holographic okungenakukhunjulwa okuveza imfihlakalo enkulu kakhulu yefilimu: umsuka we-Elementals, izidalwa ezine eziyingqayizivele ezivela endaweni efana nendawo enekhono lokulawula umlilo, umhlaba, amanzi nomoya.
Eqondiswa nguJon Watts, I-spider-man: kude nekhaya iyisici se-2017 I-Spider-Man: i-Homecoming futhi indaba yayo isethwe ngemuva kwe-Marvel Studios 'hit-mega-hit kusukela ekuqaleni konyaka, Ama-Avengers: I-Endgame. Ukudabuka ngokufa kukaTony Stark, uPeter Parker (Tom Holland) uhamba eholidini laseYurophu, kodwa izinhlelo zakhe ziyashintsha lapho ehlangana no-spymaster Nick Fury (uSamuel L. Jackson) kanye noQuamin Beck / Mysterio (Jake Gyllenhaal) oyinhloko umxwayise ngokusongela okusha ePlanethi. Iphephandaba le-movie lihlanganisa uZendaya, Marisa Tomei, uJon Favreau noJacob Batalon. I-RSP yasebenza ngaphansi kwe-Watts, umphathi we-VFX wokukhiqiza uJanek Sirrs nomkhiqizi we-VFX uCyndi Ochs.
Nakuba I-spider-man: kude nekhaya ibonisa ukubandakanyeka kokuqala kweRSP ku-franchise ye-Spider-Man, lo studio yakwazi ukudweba ngokuhlangenwe nakho kwayo kwamanye amafilimu ama-Marvel Studios kubandakanya UCaptain Marvel futhi Thor: Ragnarok. "UCaptain Marvel futhi kwakunezici eziningana ze-hologram eziyinkimbinkimbi, futhi sakha phezu kwalokho, "kusho umkhiqizi ophezulu we-RSP uGill Howe. "I-Marvel Studios inokulindela okuphezulu kanye nemibono ehlukile yokudala. Ukuze uzihlangabeze udinga ukuba ushayeke futhi ube nephayiphi eqinile. Sithole imivimbo yethu UCaptain Marvel futhi Thor: Ragnarok. Lokho kusize kakhulu ngale filimu. "
Umsebenzi we-RSP oyinkimbinkimbi kakhulu I-spider-man: kude nekhaya wahilela isiteleka esise-Venice e-Venice, e-Italy, lapho ecela khona iSpider-Man noFury ukuthi ichaze ingozi ekhona eyenziwa yi-Elementals. U-Beck udlala i-hologram ebonisa ukuthi izidalwa zendalo zivela emkhatsini olinganayo, ukubandakanyeka kwabo esikhathini esidlule seMhlaba kanye nendima yabo ekubhujisweni kweplanethi yakhe yasekhaya.
Ithimba le-RSP lakhiphe iziboniso zesigcawu ukufanisa indaba ekhulunywa nguBeck. Kulo, ama-Elemental extradimensional aboniswa njengabavela emigodini emnyama. Ukuletha lokho ekuphileni, abaculi bahola ukuphefumlelwa kusukela ekucabangeni kwezesayensi zakamuva mayelana nokubukeka nokuziphatha kwezimbobo ezimnyama, kanye nokuvezwa kwangaphambilini kwezehlakalo kumafilimu e-Marvel. "Ukubheka izimbobo ezimnyama kwakuyinselele enkulu, kokubili ngobuhlakani futhi ngokukhipha," kusho umphathi we-RSP VFX uTom Wood. "Sihlangene nezinkolelo zakamuva ezivela ku-physics-ukuthi izimbobo ezimnyama zihlanekezela kanjani ukukhanya nesikhathi-futhi zenze lokho kuguquguquko kwe-Marvel Cinematic Universe. Kwadingeka futhi sicabange ukuthi yiziphi izethameli ezilindelwe emigodini emnyama. Inqubo yokuklama ibandakanya ukulinganisa okubucayi. "
Ihologram iyaqhubeka ibonisa ukuthi ama-Elementals abe nendima efihliwe emhlabeni odlulile, ewaxhuma nabo onkulunkulu bamaqaba abahambisana nomlilo, umhlaba, amanzi nomoya. Ngenxa yalokhu kulandelana, abaculi bafunda isiteji sasendulo nesitemu. "Senze ucwaningo olunzulu ezinkulunkulu ezihlobene nezakhi zokuqala," kukhumbula uCG uMphathiswa uRyan Kirby. "Umnyango wethu weCG wadala izici ezisekelwe eJapane, eHawaii nakwezinye izingxenye zomhlaba."
Umnyango we-studio we-2D unomsebenzi ongeze imiphumela, ukuhlanganisa isenzo esibukhoma nezakhi ze-CG, nokuqedela ukulandelana. "Ngezici ezikhiqizwa yi-layout, i-FX, bheka dev, ukukhanyisa kanye ne-comp, kwakubalulekile ukugcina wonke umuntu ohilelekile kule nqubo ekhasini elifanayo," kusho inhloko ye-2D uJess Burnheim. "Uma kwakukhona ushintsho olwenziwe emnyangweni owodwa, kwaba nomphumela wokubamba iqhaza kuwo wonke umuntu. Wonke umuntu osekela umbono wokudala wayeyisihluthulelo. "
Ukulandelana kuphelela ngeplanethi kaBekk idliwe ngomlilo. Yonke le mifanekiso kwakudingeka iqhutshwe phambili ukuze ibukeke ngokucophelela kwe-hologram. Ngokwemvelo yesehlakalo, i-hologram icaciswa kusuka etafuleni elikhulu ne-Beck, Fury and Spider-Man emi eceleni. Ezingxenyeni eziningi, abadlali bangabonwa ngemuva nangembukiso we-holographic. "Sasebenzisa ama-volumetric renders ukwenza isithombe sibonakale sihlala esikhaleni," kuchaza uThomas. "Ithebula ngokwayo lanikeza inselele eyengeziwe. Kwakuyinto ebalulekile ibhokisi lokukhanya elikhanyisa ubuso babalingisi. Kwakudingeka sikhiphe lokho kukhanya, kuyifiphele noma sengeze izendlalelo kuzo ukuze kuhambisane nezinguquko ku-hologram. "
I hologram nayo kwadingeka ihambisane nezinhlelo ze-holographic ezikhonjiswe kwamanye amafilimu e-Marvel. "Sibonile ngaphambili ubuchwepheshe beHhologram ye-hologram futhi Yokuqala Galaxy ubuchwepheshe, "kuchaza uMakhuni. "Ngaphezu kwalokho, njengoba le filimu iqhubeka ngemuva kwe-Endgame, kwakudingeka sibhekelele ubuchwepheshe bayo. Ihologramu yethu kwakudingeka ihambisane nayo, ngenkathi ingeza okuthile okuthakazelisayo futhi okusha. "
Olunye umsebenzi we-RSP wawuhlanganisa indawo lapho uFury uqala ukubonakala khona, futhi kuyamangaza uPetr Parker ngokushiya ngaphandle endlini yakhe yokugezela ngenkathi ehlanza amazinyo. Ithimba le-studio lokuqamba lihlanganisa i-dart tranquilizer ukuthi ukuthukuthela kusetshenziselwa ukuthula ku-Ned kanye nama-hologram amaningana okuthi ukufutheka kubuka ekubonisweni okuphathekayo. Umnyango wokwenza umsebenzi wenza umsebenzi omkhulu endaweni esekelwe phambi kwendawo enkulu yomlilo esakhiweni esidala saseVenice esabandakanya izikrini zokuhlukanisa nokuhlanza. Ukuze uthole indawo yesikhathi sokulala noPeter Parker ebuka edolobheni lasePrague, leli qembu ladala umlingiswa weCG we-Mysterio endizayo futhi wanezela i-digital landscape yedolobha.
"Umsebenzi omningi owenziwe ngezindinganiso eziphakeme esizidalile eminyakeni embalwa edlule uye wakhiqiza ipayipi enamandla, lokhu kuqinisekiswa ngokubikezela kwethu nokuhlela kahle." Kusho uHowe. "Siwabela amaqembu ngisho nangaphambi kokuba umsebenzi ufike ngomnyango. Siyazi ukuthi yiliphi ivolumu elindelekile nokuthi yiziphi amakghono adingekayo, futhi lokho kusinika ukuguquguquka ukubhekana ngokushesha nezinguquko nezicelo ezengeziwe. "
Kuzo zonke izinyanga eziyisishiyagalombili zomsebenzi kule phrojekthi, i-RSP yahlala isondelene kakhulu neqembu lokukhiqiza nezinye izithengisi ezibukwayo njengoba izibhamu zakhiwe futhi umsebenzi wayo uguqukile. "Kwakungenalutho," kusho umkhiqizi we-VFX u-Arwen Munro. "UJanek Sirrs, uCyndi Ochs, umkhiqizi we-VFX uBryan Searing, umxhumanisi we-VFX u-Val Andino kanye nawo wonke amaqembu okukhiqiza ayesabekayo. Siziqhenya ngokukhethekile ngokulandelana kwehologramu, kusukela ekuqaleni kokuya phambili ekuhambisweni kwezidingo, ithimba lenze umsebenzi okhuthazayo, okuholela ekulandeleni okubalulekile endabeni. "
Mayelana nokuphakama kwelanga izithombe:
E-Rising Sun Pictures (RSP) sakha imiphumela ebonakalayo yokubukeka kuma-studio amakhulu emhlabeni jikelele. I-studio yethu yilabo abaculi abanamakhono abanamakhono abasebenza ngokubambisana ukuze banikeze isithombe esihle. Ukugxila ekukhiqizeni izixazululo zekhwalithi eziphezulu kakhulu, ezintsha zenza i-RSP ine-flexible, ipayipi yenkambiso, evumela inkampani ukuba ikhule ngokushesha futhi ilungise ukuhamba kwayo emsebenzini ukuze ihlangabezane nesidingo sokwanda kwezilaleli ezibonakalayo ezibukeka kahle.
I-studio yethu inenzuzo yokuthola indawo e-Adelaide, eNingizimu Afrikha, enye yezindawo ezihamba phambili kakhulu emhlabeni. Lokho, kuhlanganiswe nedumela lethu elihle, nokufinyelela kwesinye sezikhawulelo ezinkulu kunazo zonke, kwenza i-RSP ibe umshini wabenzi befilimu emhlabeni jikelele. Lokhu kusishukumisele ukuba siqhubeke siphumelele futhi sinike amandla i-RSP ukuba ibe nengxenye emikhakheni eminingi kuhlanganise noDumbo, Predator, Tomb Raider, Peter Rabbit, Animal World, Thor: uRagnarok, Logan, Pan, i-X-Men franchise neMidlalo yezihlalo zobukhosi.
Okuthunyelwe kwakamuva ngabakwa-Artisans PR (bona konke)
SMPTE Hollywood ukubamba uRob Hedrick weNational Hot Rod Association ku- “Meet an Industry Innovator” Webinar - Septemba 15, 2020
UDoug Walker weCaruso Inkampani Uxoxa Izindaba Ezingokoqobo Zabasebenzi Abaphambili Emkhankasweni Wenhliziyo Ye-OXIGEN - Septemba 15, 2020
Thumela iNew York Alliance (PNYA) Ukusingathwa Kwabalimi Abaphezulu be-NYC ku-Next "Post Break" Webinar - Septemba 15, 2020
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Umnikelo I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor Ama-spears nama-Arrows I-COLONIE / Chicago I-TVU Izinethiwekhi Imiphumela Ebonakalayo 2019-07-10
Ngaphambilini: I-Alchemy Post Sound iphakamisa inyawo layo elihamba phambili ekuhambiseni i-Foley ye-"Fosse / Verdon" ye-FX
Olandelayo: I-FSR Ihambisa izixazululo ze- 'Smart' ku-InfoComm 2019